राष्ट्रियतामा ‘हिरो’, महामारीमा ‘निरो’ « AayoMail
राष्ट्रियतामा ‘हिरो’, महामारीमा ‘निरो’
खुला सीमाबाट व्यवहार गर्नुपर्ने निकटतम छिमेक भारतको विजोगबारे हामी छिनछिनै जानकार छौं। हरेक टोल चिहानघर बनिरहेको भारतको दृश्यले हामी चसक्क हुन्छौं, किनकि जे त्यहाँ हुन्छ, यहाँ नभइ छाड्दैन। र, ठयाक्कै त्यसका लक्षणहरु यहाँ देखिन थालिसके। दिनहुँ हजारौं नागरिकको चिता र चिहानमा जलिरहेको भारतमा धन्न आत्मग्लानि फैलिएको छ– कस्तो स्वास्थ्य प्रणाली, कस्तो शासकीय व्यवस्था बनाएछौं भनेर।
मोदी सरकारको ठूलो अर्थस्रोत र मेहनत जनतामा कस्तो सन्देश पठाउने भन्ने विषयको नियन्त्रण (न्यारेटिभ कन्ट्रोल)मा पर्दै आए पनि दोस्रो लहरको भाइरसले त्यसलाई करीब भत्काएको छ। प्रकारान्तरले यो विनिर्माण प्रक्रियालाई कहाँसम्म पुर्‍याउँछ भन्ने ठेगान छैन। तर, प्रष्ट के छ भने जब खेलबाड आममानिसको जीवनमाथि हुन्छ, त्यो राजनीतिक छलछामबाट नथुनिने अवस्थामा पुग्छ। भारतको यो अवस्थाले नेपालका शासकहरुलाई सामयिक सुधार (करेक्सन)निम्ति एउटा पूर्वाभासको लाभ दिनुपर्ने हो। तर, त्यसका लागि केही न केही समझ चाहिन्छ, सरमसमेत चाहिन्छ। जुन हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा छैन, ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ।
मोदीले ठूलो भारतलाई भन्दा ओलीले आकारमा सानो नेपाललाई झन् ठूलो नोक्सानीको भागिदार नबनाउलान भन्न सकिन्न। चालु तथ्यांक यसका प्रष्ट दसी हुन्।
निषेधाज्ञाभन्दा करीब साताअघिको परामर्शमा ओली स्वास्थ्य विशेषज्ञ र टेक्नोक्रयाट्हरुलाई कोरोनाबारे पढाउँदै थिए। त्यसको केही दिनअघि बजारमा खुबै चल्तिका एक वैद्यलाई वालुवाटारै बोलाएर भेटेका उनले तिनैबाट लिएका केही उडन्ते कुरा विशेषज्ञसँग बाँडे। प्रधानमन्त्री भनिने मुलुकका सर्वोच्च कार्यकारी नै अवैज्ञानिक जड–भरत विश्वासमा जिद्दि गर्छन् भने बबुरा विशेषज्ञहरुले के बोल्न सक्नु? डोनाल्ड ट्रम्पले डा फाउसीलाई साइड लगाएजस्तै, मोदीले रामदेव उचालेजस्तै, ओलीले भ्याक्सिन–आइसियु–अक्सिजनका मामिलालाई नछोई प्राकृतिक उपचारको महत्वमा प्रवचन ठोकेका थिए।
संसारभर हावादारी नेताहरुको बोलाबाला भइरहँदा, त्यसैको लाभ लिएर एकथरी भाइरसले मानवजातिको अस्तित्वमै प्रश्न उठाइरहेका बेला, प्रमाण–तर्कबाट चल्ने विशेषज्ञहरु सुन्नजति सुनेर लुरुलुरु हिड्नुको विकल्प देख्दैनन्।
संसारभर हावादारी नेताहरुको बोलाबाला भइरहँदा, त्यसैको लाभ लिएर एकथरी भाइरसले मानवजातिको अस्तित्वमै प्रश्न उठाइरहेका बेला, प्रमाण–तर्कबाट चल्ने विशेषज्ञहरु सुन्नजति सुनेर लुरुलुरु हिड्नुको विकल्प देख्दैनन्। उनीहरुको दिमागमा राजनीतिज्ञसँग गलफत्ति गर्ने धैर्यता हुन्न।
यतिबेला कोरोना भाइरसको महामारीका विभिन्न आयाम र अनुभवमाथि दैनिक करीब दुई हजार थान अनुसन्धानपत्र सार्वजनिक भइरहेको आँकडा छ। ती कसैले अम्बाको पात उमालेर खाने सुझाएका छैनन्। केपी ओलीको यो फर्मुला ठीक सावित हुने हो भने उनी चिकित्सा विज्ञानमा नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो राजनीतिज्ञ बन्नेछन्। ती अनुसन्धानपत्रमध्ये अधिकांशको निचोड बढीसेबढी मानिसलाई भ्याक्सिन लगाएर सामूहिक प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्ने भन्ने नै देखिन्छ।
तर भ्याक्सिनको विषय ओलीराजमा ठीकविपरीत किसिमले ठडिएको छ। यहाँ त स्वास्थ्यमन्त्री नै माफियाले भ्याक्सिन ल्याउन दिएनन् भनेर रोइला गर्दैछन्। त्यो माफिया भन्या को हुन् त, जो पक्कै प्रधानमन्त्रीजत्तिकै शक्तिशाली हुनुपर्ने हो। कि माफियाका नाइके प्रधानमन्त्री नै हुन्? यदि होइनन् भने प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ठाउँका ठाउँ किन हटाउन सक्दैनन्?
केही दिनअघि ८० लाख डोज रुसी भ्याक्सिन नेपाल आउने खबर मिडियामा छायो। आयोमेल डटकमले रुसी भ्याक्सिन आयातलाई कोभिसिल्ड आयातका लाभसँग जोडिने व्यापारिक समूहहरुले करीब डेढ महिना रोकेको समाचार त्यसअघि नै छापेको थियो। यसको अभ्यन्तरमा निकै रोचक सत्य जोडिन्छ। नेपाली बजारमा कोभिसिल्ड विक्रीका लागि ठेक्का लिनेहरु ओलीकै लाडप्यारमा रजाईं गरिरहेका घरानाहरु हुन्। जसले ओलीको आशिर्वादबाट अन्य प्लेटफर्ममा समेत एकछत्र अवसर पाएका छन्।
डेढ महिनाको अवधिमा हजारौं नेपाली युवाको ज्यान बचाउने, अर्वौंको अर्थव्यवस्था जोगाउने अवसर केही घरानाको लोलोपोतोमा पर्दा गुम्यो कि गुमेन?
जब भारत आफैं संकटमा फसेर कोभिसिल्ड निर्यात नगर्ने अवस्थामा पर्‍यो, ती घरानाहरुमाथिको ओलीको भरले काम गर्ने भएन। भारतले पनि रुसी भ्याक्सिन लिने निर्णय गर्‍यो, ओली नाकको चालले त्यतै लागे। यावत् भइरहँदा जनताप्रतिको जिम्मेवारीको प्रश्न चाहिं के त? भ्याक्सिन पाएसम्म जहाँको लगाए पनि हुन्छ, भारतकै लगाउनुपर्छ भन्ने के छ? जबकि भारतै संसारबाट भ्याक्सिन र अक्सिजन खोजिरहेको छ। अब भन्नोस्, डेढ महिनाको अवधिमा हजारौं नेपाली युवाको ज्यान बचाउने, अर्वौंको अर्थव्यवस्था जोगाउने अवसर केही घरानाको लोलोपोतोमा पर्दा गुम्यो कि गुमेन?
करोडौं खर्च (जसको स्रोत पारदर्शी छैन) लाग्ने चिकित्सा विज्ञानका अभूतपूर्व अभ्यास (प्लाज्माथेरापी, ट्रान्सप्लान्टेशन)बाट अहिले नाराजुलुस र उद्घाटनमा जति पनि हुर्दुराउन सक्ने अवस्थामा पुगेका ओलीले जनतालाई खोप लगाउने विषयमा चाहिं यस्तो खेलवाड गर्नु नेपाली जनताकै दुर्भाग्य मात्र हो। त्यसमाथि अम्बाको पातको टुक्के किस्सा दिएर अभरमा परेका नेपाली जनतामाथि मर्म–उपहास गर्दा पनि ताली पिटेर वाही वाही गरिनु पनि यही समाजको विरोधाभाष हो।
बरु पार्किङ ठेकेदारलाई विलौना गरे वाइक हेरचाह गरिदेला, जनता जति कराए पनि ओली सुन्नेवाला छैनन्।
अपुरो धरहरा पुगेर फोटोसेसन गरेपछि प्रधानमन्त्रीको स्वर भासिएको छ। अब आफ्नो केही नलाग्ने देखिएपछि वालुवाटारको नवनिर्मित भवनमा ‘निरो–बाजी’ गरिबस्ने उपक्रम सुरु भएको छ। तर, यतिमै पनि जनतालाई केही भनेर त दंग्याइरहनै पर्‍यो। कक्षा ८ पास पूर्व वैदारले प्रहरी थाना अगाडि बसेर नेपाली कागजमा लेख्ने जाहेरीजस्तो लाग्ने वक्तव्य कुनै एक जागिरे अधिकारीका नाममा हिजो जारी गर्न लगाएको त्यसै होइन। पूरै देश उक्त वक्तव्यको भाषामा अल्झेको छ, आशयमा वादविवाद गर्दैछ। यथार्थ बुझ्ने हो भने त्यो सुनियोजित धम्की हो। त्यसले जनतालाई जम्माजम्मी भनेको छ-संक्रमणमा नपर्नु, परेमा हामी जिम्मेवार छैनौं। यो त सशुल्क पार्किङ नामक ठाउँमा हेल्मेट–वाइक हराएमा जवाफदेही हुनेछैन भनेर लेखिएजस्तै हो। बरु पार्किङ ठेकेदारलाई विलौना गरे वाइक हेरचाह गरिदेला, जनता जति कराए पनि ओली सुन्नेवाला छैनन्।
जनताले कोरोना महामारीको यस्तो कठीन समयमा पनि कर तिर्न छाडेका छैनन, कानून मान्ने जनता अन्तका भन्दा बरु नेपालकै हुन्। स्वजन, छिमेकलाई सहयोग गर्ने दिल नेपालीहरुमै बढी छ। बरु एनएनआरएन नामक एउटा संस्थाका केही अग्रसर व्यक्तिहरुले २० हजार नेपालीलाई उद्दार गरी स्वदेश फर्काए। यस्ता सजिला जनतालाई दिगभ्रमित पार्ने, संकटका बेला झन जाक्ने शैलीको निर्मम समीक्षा भविष्यले गनुपर्ने छ।
ओलीले अहिले ध्यान दिएको एउटै मुद्दा हो–सत्ता। यसको अंकगणित किमार्थ आफ्नो पन्जाबाट बाहिर नजाओस भन्नाका खातिर उनले आन्तरिक र बाह्रय दुवैथरी स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरिरहेका छन्। उनको तजविज मिलाउनका लागि मात्र जनता समाजवादी पार्टी आजका दिनसम्म जुटेर रहेको हो, प्रष्टै भइसक्यो। प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य सिध्याउने, मधेश राजनीतिलाई दीर्घकालीन सत्ता समीकरणको तुरुप बनाउन चाहने स्वार्थ समूह र ओलीको कुरा मिल्नुबाटै अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम निर्देशित छ। यो कुनै अनौठो परिघटना होइन, ओलीले केही समयअघिसम्म राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई गोटी बनाउनु परेको थियो–सत्ताप्राप्तिनिम्ति। अब उनी पुरानै क्याम्पमा फर्केका छन्। जहाँ सबैलाई सजिलो पर्छ।
ओलीले केही समयअघिसम्म राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई गोटी बनाउनु परेको थियो–सत्ताप्राप्तिनिम्ति। अब उनी पुरानै क्याम्पमा फर्केका छन्। जहाँ सबैलाई सजिलो पर्छ।
जनता त्यसै पनि मरिरहेकै हुन्, जनताको सुविस्ता सोचेर कहिले पो राजनीति चल्ने हो र–ओली र ओलीजन्य चरित्रहरुले भित्रि अन्तरस्करणमा राख्ने भाव यही नै हो। होइन भने, दुरदराजका गरीबलाई सयौं गाडीमा कोचेर शक्ति प्रदर्शनका लागि किन कोरोनाको भुङ्ग्रो काठमाडौं ल्याइरहनुपर्थ्याे र?
राजनीतिमा क्षुब्ध, लुब्ध पात्रहरुले पनि केही हदसम्म ‘गरिखान’ सक्छन्। कोरोनाले सोत्तर पार्दै जाँदा कुनै बेला ओलीले कुनै ठाँटको पत्रकारलाई वालुवाटारै बोलाएर भनिदिनसक्छन्– अमेरिका, भारत, युरोप र ब्राजिलले नसकेको कोरोना लडाईं हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकले कहाँ सक्छ? यो त हाम्रो लोकप्रियता देखिसहन नसक्ने निश्चित आरिसेहरुले फैलाएको अपजसको हल्ला मात्र हो। हामीले दिएको खोप लगाउने, अनि हाम्रै विरोध गर्ने?